❤️ IGTV Shopping est désormais disponible sur Instagram - Winches क्लब
इन्स्टाग्रामले यस महिनाको सुरुमा घोषणा गर्यो कि IGTV किनमेल अब ग्लोबल छ.
किनमेल सुविधा को विशाल सफलता समाचार फीड पछि आउँछ, कथा र प्रत्यक्ष पोस्ट धेरै व्यवसाय र ब्रान्ड मालिकहरु द्वारा प्रयोग गरीएको छ.
इन्स्टाग्राम रिपोर्ट लगभग १३० मिलियन मानिसहरु प्रत्येक महिना किनमेल पोस्ट हेर्न.
यी तथ्या्कहरु दिईयो, यो सही अर्थ बनायो इन्स्टाग्राम IGTV को किनमेल समारोह सुरु गर्नुहोस्.
स्टोर कार्यक्षमता को मूल उद्देश्य को लागी ब्यापारहरु लाई अझ बढ्न र मद्दत गर्न को लागी थियो, इन्स्टाग्राम बाट, प्रयोगकर्ताहरु को 60% अन्वेषण र इन्स्टा मा नयाँ उत्पादनहरु खोज्न सहमत.
यदि तपाइँ अझै सम्म तपाइँको इन्स्टाग्राम स्टोर सेट अप गर्नुभएको छैन, हामी तपाईंलाई यो गर्न सिफारिस गर्दछौं. चीजहरु पहिले भन्दा छिटो परिवर्तन हुँदैछ, र स्टोर सुविधा इन्स्टा मार्केटर्स को लागी एक ठूलो हिट भएको छ.
उनीहरु एक धेरै सुविधाजनक र कुशल तरीका बाट उनीहरुका दर्शकहरु सम्म पुग्न मद्दत गरेर प्रयोगकर्ताहरु लाई महान सेवा को भएको छ।.
इन्स्टाग्राम को छिटो अपडेट र परिवर्तनहरु लाई उनीहरुका प्रयोगकर्ताहरुलाई कब्जामा राख्न को लागी सुनिश्चित गर्दछ. त्यसपछि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसको हिस्सा हुनुहुन्छ र IGTV किनमेल संग तपाइँको दर्शकहरु लाई कब्जा.
तपाइँ आफ्नो ब्रान्ड को लागी IGTV किनमेल को उपयोग गर्नु पर्छ?
IGTV किनमेल प्रभावशाली र रचनाकारहरु जो आफ्नो दर्शकहरु संग जोड्न को लागी आफ्नो मंच को उपयोग को लागी एक रोमाञ्चक अवसर हो, सजीलै अतिरिक्त पैसा कमाउन.
IGTV किनमेल तपाइँ उत्पादनहरु तपाइँ तपाइँको भिडियो मा कुरा गरीरहनु भएको छ ट्याग गर्न को लागी अनुमति दिनेछ, सीधा यी भिडियोहरुमा.
यो कार्यक्षमता एक फोटो मा एक व्यक्ति ट्याग गर्न अनुमति दिन्छ कि समान छ।, तर यसको सट्टा एक उत्पादन ट्याग गरेर.
पहिले, प्रयोगकर्ताहरु सीमित थिए कि उनीहरु कसरी उनीहरुका भिडियोहरुमा उनीहरु लाई बढावा दिइरहेका उत्पादनहरुको विज्ञापन गर्न सक्थे.
ट्याग उत्पादनहरु को संभावना को लागी धन्यवाद, तपाइँ अब तपाइँको भिडियो को क्याप्शन मा धेरै लि leave्क छोड्न को लागी आवश्यक छ.
अर्को शक्तिशाली उपकरण कैशियर प्रकार्य हो, तर यो हाल संयुक्त राज्य मा मात्र उपलब्ध छ. जब यो विश्वव्यापी छ, चीजहरु सदाको लागी परिवर्तन हुनेछन्.
एक उत्पादन हेर्न को लागी क्षमता, किन्न को लागी छुनुहोस् र इन्स्टा मा चेकआउट तरीकाले मान्छे पसल को लागी इन्स्टा को उपयोग गर्न को लागी परिवर्तन गर्न जाँदैछ.
वास्तबमा, 70%% जो पसल नयाँ उत्पादनहरु को खोज को लागी इन्स्टाग्राम मा फर्कन्छन्.
पछिल्लो महिनाहरुमा धेरै परिवर्तन भएको छ, र तपाइँ तपाइँको सफलता लाई अधिकतम गर्न को लागी तपाइँको क्षेत्र मा उपलब्ध सबै सुविधाहरु को उपयोग गर्न को लागी सुनिश्चित गर्नु पर्छ.
IGTV किनमेल को भविष्य
IGTV किनमेल बूम गर्न को लागी सेट गरीएको छ र राम्रो संग तपाइँको ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका बन्न सक्छ.
भिडियो ढाँचा को लागी धन्यवाद, आवाज र अब उपशीर्षकहरु लाई, तपाइँको सामग्री पहिले भन्दा धेरै सुलभ छ. अधिक सुलभ तपाइँको सामग्री छ, ठूलो तपाइँको दर्शकहरु हुनेछ. यो यसको सबै महिमा मा मार्केटि छ.
महामारी को समयमा, इन्स्टाग्राम महान लम्बाई मा गईएको छ नयाँ सुविधाहरु जस्तै स्टोर प्रकार्य लाई रोल गर्न को लागी, QR कोड र अब IGTV किनमेल.
उनीहरुको मुख्य उद्देश्य कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्नु रहेको छ, अंक, प्रभावकारी र व्यक्तिहरु आफ्नो अधिकतम क्षमता सम्म पुग्न.
तपाइँ साँच्चै यो समय लाई पुनर्विचार गर्न को लागी र तपाइँको मार्केटि strategies रणनीतिहरु लाई हरेक सुविधा को सबै भन्दा धेरै उनीहरु लाई प्रस्ताव गरीरहन्छन्।.
कसरी भिडियो संग तपाइँको दर्शक कब्जा गर्ने
यदि तपाइँ IGTV किनमेल को सबै भन्दा बाहिर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, पहिले तपाइँ पक्का सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँ भिडियोहरु को माध्यम बाट तपाइँको दर्शकहरु संग जोड्न सक्नुहुन्छ.
भिडियोहरु तपाइँको इन्स्टा उपस्थिति बृद्धि गर्न को लागी एक शक्तिशाली र सजिलो तरीका हुन सक्छ, तपाइँ कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको दर्शकहरु संग गहिराई मा संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ.
भिडियोहरु तपाइँको समर्पण देखाउँछन् र सजीलै संग तपाइँको ब्रान्ड कहानी साझा गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ. न केवल तपाइँ तपाइँको अनुभव मा एक सञ्झ्याल प्रदान गर्दछ, तर तपाइँको दर्शकहरु लाई तपाइँ के सेवा को लागी तपाइँको जुनून महसुस गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाइँको दर्शकहरु संग संलग्न गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्, उदाहरण को लागी:
Of उत्पादनहरु को विशेषताहरु हाइलाइट गर्नुहोस्
New नयाँ उत्पादनहरु प्रस्तुत गर्नुहोस्
Content एक उत्पादन को प्रक्षेपण अघि विशेष सामग्री
Educational शैक्षिक प्रयोजनका लागि
कसरी एक भिडियो अपलोड गर्न को लागी तल दिईएको निर्देशनहरु को पालन गर्नुहोस् र आज तपाइँको प्रशंसकहरु संग तपाइँको कहानी साझा गर्न को लागी शुरू गर्नुहोस्।.
अघिल्लो लेखकसरी टिकटक दृश्य प्राप्त गर्ने – एक जानकारीमूलक गाइड
अर्को लेखइन्स्टाग्राम चेकआउट को बारे मा सबै